IAR | KBZ MS
၁) ယခုပေါ်လစီအောက်တွင် မည်သည့်အရာများကို အာမခံထားနိုင်သလဲ?
- ဖော်ပြပါပေါ်လစီသည် အစားထိုးတန်ဖိုးအပေါ် အခြေခံ၍ အောက်ပါပိုင်ဆိုင်မှုများ အကျုံးဝင်ပါသည်။
စက်ရုံ၊ စက်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (ပရိဘောဂ၊ အဆောက်အဦးအတွင်း တပ်ဆင်ထားသော အသုံးအဆောင်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများ)
ကုန်ပစ္စည်းများ (ကုန်ချော၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ) ပါဝင်ပါသည်။
၂) အဓိက အကျုံးဝင်သော အကာအကွယ်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	မီး၊ မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှု၊ လေယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ခိုးယူမှု (အကြမ်းဖက်မှုနှင့် သို့မဟုတ် အတင်းအကြပ် ဝင်ရောက်မှုသာ)၊ လေပြင်းမုန်တိုင်း၊ ဟာရီကိန်း၊ ဆိုင်ကလုန်း၊ တိုင်ဖွန်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ ငလျှင်လှုပ်ခြင်း စသဖြင့်…
၃) အဓိက အကျုံးမဝင်သော အကာအကွယ်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	Sanction ကန့်သတ်ချက်များ
•	ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်၊ မှားယွင်းသောလက်ရာ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်း
•	ရေဒီယိုသတ္တုကြွမှုကြောင့် ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ဇီဝပစ္စည်း၊ ဇီဝဓါတုပစ္စည်းများ နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် လက်နက်များကြောင့် ပျက်စီးမှုများ
•	ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးမှုများ
•	Covid-19 ကဲ့သို့ ရောဂါကူးစက်မှုများကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုများ
၄) အပိုအန္တရာယ် အကာအကွယ်တွေက ဘာတွေလဲ?
•	လုပ်ငန်းပြတ်တောက်ခြင်း- ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပိုင်း ၁ တွင် ဆက်စပ်သော (၁) လစာ (၂) စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ စသဖြင့်ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေဆုံးရုံးမှုများအတွက် ပြန်လည်အစားထိုးပေးခြင်း အကာအကွယ်။
၅) မည်သူတွေက အာမခံထားနိုင်သလဲ?
•	အခြေခံအားဖြင့် အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များ၊ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။
၆) အာမခံသက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
•	အခြေခံအားဖြင့် ၁နှစ် (ပေါ်လစီသက်တမ်းမကုန်မီ နှစ်စဉ်သက်တမ်းထပ်မံ တိုးနိုင်ပါသည်)
၇) ပရီမီယံကြေးက ဘယ်လောက်လဲ?
•	အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော တည်နေရာ၊ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ၊ လုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မီးငြှိမ်းသတ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ထားမှု စသည်တို့အပေါ်မူတည်ကာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။
•	ပရီမီယံသတ်မှတ်ချက်အရ နှုန်းထားများသည် နေထိုင်မှုပုံစံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးအစား၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပုံစံရေးဆွဲမှု၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများ၊ လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်အတွင်း အသေးစိတ် လျော်ကြေးအတွေ့အကြုံများ၊ risk assessment report (ရှိပါက) နှင့် အာမခံတန်ဖိုး ခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုတို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။
၈) ပရီမီယံ ပေးချေရမည့် နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
၉) အာမခံဝယ်ယူရန် မည်သည့်အချက်အလက်တွေ လိုအပ်သလဲ?
•	အန္တရာယ်၏ တည်နေရာ၊ နေထိုင်မှုနှင့် အဆောက်အဦးအမျိုးအစား
•	မီးဘေးကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် လုံခြုံရေးအစီအမံများ
•	လွန်ခဲ့သော ၃နှစ်က အသေးစိတ် Claims အတွေ့အကြုံများ
•	Risk assessment report (ရှိပါက)
1) What can be insured under this policy?
· This policy covers the following property based on replacement value.
Building (excluded land value)
Factory, Machinery, Equipment and related materials
Contents (Furniture, Fixtures and other materials)
Stocks (Finished Goods, Raw materials and Producing materials).
2) What are the major risks covered?
3) What are the major risks excluded?
4) What are the additional coverages?
Business Interruption: Coverage that replaces business income lost which is related with section I material damage such as (1) Payroll (2) Gross Profit, etc.
5) Who can be insured?
Basically, Property Owner
6) What is the period of insurance?
Basically 1 year (can be renewal annually before the policy is due)
7) What are the premium rates?
It would be considered according to the risk location, nature of business, security management, firefighting system establishment, etc.
In terms of premium, the rate depends on its occupancy and construction type, property layout drawing, fire protection facilities and security measures, detailed claims experience for past3years, risk assessment report (if any) and breakdown of sum insured value.
8) What is the premium payment type?
9) What information is required to get insurance?
Location of risk, its occupancy and construction type
Fire protection facilities and security measures
Risk assessment report (if any)
Property layout drawing
Breakdown of sum insured